रंग खबर, काठमाण्डौं, पौष ०३– युवा अभिनेता प्रदिप खड्काको आफ्नै लगानीमा बनेको फिल्म ‘इस्केप’ आगामी माघ २३ गतेदेखि सार्वजनिक प्रदशर्नमा आउने भएको छ । विहिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच
आभाष : संयम कसको होलान्, निशा या आश्माको ? (फोटोफिचर)
रंग खबर, काठमाण्डौं । आगामी पौष २५ गतेबाट सार्वजनिक प्रदशर्नमा आउने फिल्म ‘आभाष’ को तीनवटा पोष्टरहरु सार्वजनिक गरिएको छ । संयम पुरी, सलोन बस्नेत, आश्मा डि.सी, निशा अधिकारी, प्रकृति श्रेष्ठ
प्रदशर्नको एक महिना अगाडी मात्र नम्रता किन लागिन् ‘सोल सिस्टर’ को प्रमोशनमा ?
रंग खबर, काठमाण्डौ – प्रदशर्नको झण्डै एक महिना अगाडी नायिका नम्रता श्रेष्ठले आफ्नो आगामी फिल्म ‘सोल सिस्टर’ का बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएकी छिन् । सोमबार साँझ राजधानीस्थित आफ्नै एटिक रेष्टुरेन्टमा
‘सिम्पल सिम्पल कान्छी’ का लेखक अब निर्देशक बन्दै
रंग खबर, काठमाण्डौं । ‘सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला’ बोलको यो गीत सायद कमैले मात्र नसुनेका होलान् । फिल्म ‘अन्दाज’ को यो चर्चित गीतका लेखक शंकर अधिकारी घायलले अब फिल्म
रंग खबर, काठमाण्डौं । हाल तीब्र गतिमा छाँयाकन भईरहेको फिल्म ‘चंखे शंखे पंखे’ को पहिलो चरणको सेट निर्माणमा १७ लाख खर्च भएको खबर प्राप्त भएको छ । यो नेपाली फिल्म
सुवेदीको ‘लालजोडी’ मा राजेशपायल र मनिषाको ‘क्या ब्युटी’
रंग खबर, काठमाण्डौं । एउटा साथीपछि निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीले निर्देशन गर्न लागेको दोस्रो फिल्म लालजोडीको गीत रेकर्डिङ सुरु भएको छ । दिलासा क्रिएसनको ब्यानरमा निर्देशक सुवेदी स्वयं निर्माता रहेको फिल्मको
एक्सनले भरिपुर्ण अलविदामा आर्यन डिएसपी ! (भिडियोसहित)
पौष २५ गतेबाट रेखा थापाको ‘तथास्तु’ संगै प्रदशर्नमा उान लागेको फिल्म अलविदाको अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । अभिनेता आर्यन सिग्देल फिल्ममा डिएसपीको भुमिकामा देखाइएका छन् । पछिल्लो डेढ मिनेट
रंग खबर, काठमाण्डौँ । योगेश घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘भूल भूलैया’ मा समावेश डान्सिङ नम्वरको गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘आँखैमा अनुहार झ्याप्पै’ बोलको सार्वजनिक गीतमा अभिनेत्री निता ढुङ्गाना र अभिनेता शोहित मानन्धरले झ्याप्पै नृत्य
रंग खबर, काठमाण्डौं । अहिले सम्पादनको क्रममा रहेको फिल्म ‘मेरो मान्छे’ का निर्माता नारायण खतिवडा आज दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । राजधानीको बागबजारस्थित होटल हार्दिकको कोठा नं. १०३ मा